ကာရာအိုကေ လို စာသားကြည့်ပြီး အကျယ်ကြီး အော်ဆိုလိုက်မိတယ်..
“((((((..ဒုန်း ဒုန်း ဒုန်း.. ))))))”
ဟီးး... ကျနော်တို့ဆီမှာလည်း ဒီလိုပါပဲ.. ဘေးခန်းက သီချင်း အော်ဆိုရင် တံခါး လာထုရော..း)
ခိုင်ထူးနဲ့ ထူးအိမ်သင်တို့ရဲ့  သီချင်းတွေက ကျမရဲ့  အကြိုက်ဆုံးသီချင်းတွေပါ ။ သီချင်းပို့စ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုအောင်သာငယ်....။ ( မီးငယ် )
ဟုတ်တယ်အကိုရေ.. အဲလို mood ၀င်ပြီး တီးလို့ ဆိုလို့ ကောင်းပြီဆိုရင် ဖြစ်ပြီးဗျာ။
ဒီကောင်တွေ ဒီမိုကရေစီကို နားမလည်ဘူးထင်တယ်။
အဲဒီသီချင်းက ဂစ်တာကိုင်မိရင် ကျမ တီးဖြစ်နေကျ သီချင်းတွေထဲက တပုဒ်ပေါ့... ညည်းဆိုလေး ဆွဲပြီး ဆိုလို့ရတာကိုးးး
ှအကြိုက်ဆုံးဆိုပြီး ရှိတဲ့ထဲမှာ အဲဒီသီချင်းလဲ ပါတယ် အစ်ကိုရေ...
ကိုအောင်သာငယ်တို့ ကတော့ နောက်တစ်ခေါက်ဆိုရင်
အိမ်ပြန်ချင်တယ် အလွမ်း.. ဆိုပြီး ဟစ်မလား မသိ...
ကိုအောင်သာငယ့် အသံပါမလာမှ ဟူးးးး တော်သေးတယ်လို့ ။
ကျေးဇူးပဲ။ မဆိုခဲ့တာကို ပြောတာပါ။း)
သိပ်ကောင်းတဲ့ သီချင်းလေးပါအကို။ အကို့လက်သံလည်း တော်တော်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်။
ko atn, သီချင်းစာသားထဲက မွန်းတဲ့ချိန် ဆိုတာက မွန်းတည့်ချိန်ကို ပြောတာမဟုတ်လား ? ။ ဆရာလုပ်တယ်လို့ မထင်နဲ့နော်....။ ( M. N )
စာသားလေးပဲ အပေါ်က နိဒါန်းလေးပဲ ဖတ်သွားတယ်ဗျ။ စက်က ဘာမှကြည့်လို့မရအောင် ဖျက်ထားတော့ နားထောင်လို့လည်းမရ ဆိုးတယ်နော်း)
ကိုအောင်သာငယ် ကီးဘုတ်တီးတာ အရမ်းကောင်းတယ် ကျမတို့ Saskatoon မြို့ကို ပြောင်းလာပါလား။ ဒီမှာက ဆိုလို့လည်းရ တီးလို့လည်းရတယ်။ သင်းကြန်အတွက်တောင် ကျမအိမ်အောက်ထပ်မှာ တီးဝိုင်းတိုက်တာ လနဲ့ချီသွားတယ်။ ပြသနာမရှိဘူး။ ဒီမှာ ကီးဘုတ်သမားလည်း လိုနေတယ်ဆိုတော့ ဟန်ကျတာပေါ့။ နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် ကျမ သန်းထွေးကြူပါ၊
အသံဖွင့်နားထောင်တာ မရလို့ ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာ မသိရဘူး။ ကျွန်မအမျိုးသားလည်း ခေတ်ပေါ်သီချင်းတွေကို ဂီတာနဲ့ ကိုယ်တိုင်တီးပြီး ဆိုလို့တတ်သလို ခေတ်ဟောင်းသီချင်းတွေကိုတော့ စန္ဒယားတို့ မယ်ဒလင်တို့ကို တီးတာ သိပ်မကျွမ်းကျင်ပေမယ့် တီးပေးသမားရှိရင် ဆိုတာ သိပ်ကောင်းတယ်။ ဒီမှာ သူငယ်ချင်းတွေ မင်္ဂလာဆောင်ရင်၊ သင်္ကြန်တို့ ရှစ်လေးလုံးတို့လို အခမ်းအနားတွေလုပ်ရင် ဆိုနေကျပဲ။ ကိုအောင်သာငယ် ဘလော့ဂ်ကို အမြဲဝင်လို့မရဘူး။ Fire Fox နဲ့ သွားရင်တော့ ဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့် မြန်မာစာ ဇော်ဂျီလက်ကွက် သရစာလုံးတချို့ ပြောင်းသွားပြီး မြန်မာဖတ်လို့ မရဖြစ်သွားလို့ Fire Fox ကို ကျွန်မမသုံးဘူး။ IE နဲ့သုံးရင် Font ဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့် အင်တာနက်က ပြုတ်ကျတာရှိတယ်။ မပြုတ်ကျရင်လည်း ၀င်လို့မရဘူးလို့ ပြောတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူး။
ဒီသီချင်းလေးကို သိပ်သဘောကျတာပဲ.. ကွန်နက်ရှင်မကောင်းတော့ ထစ်အ ထစ်အ ဖြစ်နေတာနဲ့ ဒေါင်းလုပ် ဆွဲချသွားပြီး နားထောင်လိုက်ပါတယ်။ အသံမပါတော့ ကျမ ပြန်ဆိုတဲ့အခါ နှစ်သံထွက်မှာ မစိုးရတော့ဘူးပေါ့.. :)..
ကိုရင်နော် - ဘ၀တူတွေ ပေါ့ဗျာ...း)
မီးငယ် - လာနားထောင်တာ ကျေးဇူးပါ။ မွန်းတည့်ချိန်က အမှန်ပါ...
နေညိုရင့် - ငါ့ညီကြလည်း ခံစားနေရတာတွေ များပြီး ထင်တယ်...း)
ကလူသစ် - They know civil rights... :)
မမေငြိမ်း - အကြိုက်ချင်း လားတူနေပြီလား...း)
ကိုလူထွေး - အားလုံးကိုယ်စား တတ်နိုင်ရင် ဆိုတီး လုပ်ပေးပါ့မယ်... ဆိုတီးစေချင်တဲ့ သီချင်းတွေ ပြောထားလေ...
မအယ် - ကျေးဇူးတင်သွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါသည်... မောင်နှမ အချင်းချင်း စိတ် မဆိုးရ...း)
မနော် - Thanks!!!
မိုးမြင့်တိမ် - ကျေးဇူး...
ဦးဂင်ကြီး - အဲလိုမှ ပြောပါ့မလားလို့ ...
တူမောင်မျိုး - ဘာတွေ ဖြစ်နေသလဲ ငါ့တူကြီး...
Nolan - (မသန်းထွေးကြူ) တကယ်တော့ ကျနော်က ခုမှ သင်နေတုန်းပါ... ဒီသီချင်းကို ၃ ကြိမ်တီးပြီး Record လုပ်ထားတာပါ... အထင် မကြီးနဲ့...
သက်ဝေ - Thankls, Little Sis.
မငယ်နိုင် - ကျနော့် ဘလော့က template ကြောင့် ဖြစ်မှာပါ... သီချင်းကို eSnips မှာ သွားပြီး ဒေါင်းလုပ်ဆွဲလို့ရပါတယ်...
မသိင်္ဂီ- ကာရာအိုကေ ဆိုလိုက်ပေါ့... အဲလို ဆိုလို့ ရရင် ကျနော် တီးထားတာလေး တီးရကြိုး နပ်ပါပြီ...